Samsung Galaxy Xcover 4: စျေးနှုန်း၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ | Androidsis
သော်လည်း အသစ် Galaxy S8 နှင့် S8 Plus အကယ်၍ သင်ရှာဖွေနေသည်အလွန်အမင်းအခြေအနေများအတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါက၎င်းတို့သည် IP68 ခုခံအားနိမ့်ပါးသောဖုန်မှုန့်များနှင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်၊ အကယ်၍ သင်သည်ယခုလတွင်ဥရောပနှင့်ဥရောပ၌ရောင်းချမည့် Xcover 4၊ အလယ်အလတ်တန်းစား terminal ကိုကြည့်ရှုသင့်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်။
ဗြိတိန်စတိုး Clove UK မှအတည်ပြုသည်။ Samsung Galaxy Xcover4ကို24ပြီ ၂၄ ရက်တွင် ၀ ယ်ယူရပါမည် နှင့် ၂၄၉ ပေါင် (သို့) ယူရို ၂၉၀ ဈေးနှုန်း.
Samsung Galaxy Xcover4၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါပဲ ယခင်ပုံစံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်္ဂါရပ်အသစ်များစွာမများပါ။ တကယ်တော့အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကဒီကြမ်းတမ်းတဲ့ဖုန်းပေါ်ရှိဆော့ဖ်ဝဲနှင့် RAM ပမာဏတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကစတင်ခဲ့သော Xcover နှင့်မတူဘဲ terminal အသစ်သည် Android 7.0 Nougat operating system ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာသည်။
တူညီသောအမျိုးအစားရှိအခြားကိရိယာများနှင့်ခွဲခြားထားသည့်အခြားအသေးစိတ်တစ်ခုမှာ၎င်းအားဖြစ်သည် MIL-STD 810G စစ်ရေးလက်မှတ်၎င်းသည်ကြီးမားသောအမြင့်များမှရေတံခွန်များမှကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်စက်တွင်လည်းရှိသည် IP68 စံနှုန်းရေထဲတွင်မိနစ် ၃၀ အထိ ၁.၅ မီတာအထိနက်ရှိုင်းစွာရှင်သန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားအရာများထဲတွင်, Xcover4a ပါဝင်သည် HD 5p resolution ဖြင့် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်အဖြစ် နောက်ဘက်ကင်မရာ 13 megapixel နှင့် 1.4GHz quad-core ပရိုဆက်ဆာ.
နောက်ဆုံးသတိပြုပါ RAM က 2GB ပါသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်သည် 16GB သာရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားaဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည် microSD ကဒ်။ ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့စမတ်ဖုန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ၅ megapixel selfie ကင်မရာနဲ့5mAh ဘက်ထရီတို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။
Samsung ရဲ့ Galaxy Xcover 4
operating system ကို အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat
resolution ကို HD (1280 x 720 pixels | 294 DPI)
Processor ကို4GHz 1.4-core ချစ်ပ်
ချဲ့ထွင်မှု 256GB အထိ microSD
ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 4.2 + WiFi 802.11a/b/ g / n dual band + NFC + microUSB
GPS စနစ် GPS + GLONASS + A-GPS စနစ်
အာရုံခံကိရိယာ Proximity + Gyroscope + Digital Compass + ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအာရုံခံကိရိယာ
ကာကွယ်မှု IP68 + Mil-STD 810G
နောက်ကင်မရာ 13 MPx F / 1.9 + Flash + Full HD ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း 30FPS ဖြင့်
ရှုထောင့် 146.2 73.3 9.7 မီလီမီတာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy Xcover4ကိုဥရောပသို့24ပြီ ၂၄ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်
Carlos Quintero ဟုသူကပြောသည်
မြေအနေအထားအမျိုးမျိုးရှိသောဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်သည်ဤဆောင်းပါးတွင်မဖော်ပြထားပါ။ ၎င်းကို Samsung ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် MIL-STD-810G အသိအမှတ်ပြုထားကြောင်းပြောခြင်းသည်ကောင်းပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်စစ်ဆေးမှု / စမ်းသပ်မှုများစွာပါ ၀ င်ပြီးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရန်၎င်းတို့အားလုံးကိုသင်မလိုအပ်ပါ။ သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ရုတ်တရက်အပူအပြောင်းအလဲများ၊ တုန်ခါမှု၊ စိုထိုင်းဆစသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဖြတ်သန်းသွားသောသူများကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာရွက်တွင်ဖော်ပြသင့်သည်။
Carlos Quintero အားပြန်ပြောပါ